Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Jaaliyadaha Ogadeniya ee Aduunka oo Maanta ka furmaya London
Shirkii Jaaliyadaha Ogadeniya ee Aduunka oo Maanta ka furmaya London
Posted by ONA Admin	/ September 12, 2014
Wufuudi iyo xubnihii Jaaliyaadka Ogadeniya ee maanta shirku uga furmayay magaalada London ayaa ku sii jeeda Madashii shirka, halkaas oo maanta 11 Aroornimo wufuuda shirkoodu ka furmi doono. Iyada oo la filayo in shacab aad u badan ay kasoo qeyb gali doonaan shirweynaha Jaaaliyaadka Ogaden ee maanta ka furmi doona London.
Yaa marti u ah Shirka
Hadaba mar aan gudida Qaban qaabada wax ka weydiinay wufuuda shirka ayaa ay ii Xaqiijiyeen innuu shirkan kasoo qeybgali doono masuuliyiin sare oo dowli ah iyo kuwo Hayada Ajanabi ahba leh in shirkan lagu marti qaaday.
Xubnaha Shirka lagu marti qaaday waxaa kamid ah Xoghayaha guud ee ururka UNPO Mr Marino Busdachin iyo wufuud kale oo maanta kasoo qeyb gali doona shirkan.
Filimaanti Cabdullaahi Xuseen
Waxaa kale oo markii u horeysay Wadanka UK, lagu daawan Doona Filimaantii Qarsoona ee Cabdullaahi Xuseen kasoo qaaday gudaha Ogadeniya, filimadaas oo ay ku jiraan muuqaalo aan horey loo arag. Filimkaas oo xiiso badan looga qabo wadanka Ingiriiska ayaa maanta Jimcada lagu daawan doona qeybo kamid ah.
Shirkan ayaa sida gudida qabanqaabadu ay sheegeen noqon doona mid aad u qiimi badan oo wax tar badan u yeelan doona halganka.
Shirka ayaa markuu bilowdo toos loo rajeynaya in hawada loogu soo xidho. Iyada oo sidoo kale weebabka halganka ka hadla oo dhan si joogta ah xogta shirka loogu baahin doono.
Hadaba isha ku hey, hadii aad wadanka UK ku nooleyn, waxaad kaga dhargi doonta Bogga ONA. oo shirkaas si toos ah aad kala socon doontaan.
Wariyaha Jaaliyada London, ONA.